खुसीको खबर : नेपाली छोराले अमेरिकन आइडलमा तहल्का पिटे ! सम्मान स्वरुप लाईक र शेयर गर्नुहोला (भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/खुसीको खबर : नेपाली छोराले अमेरिकन आइडलमा तहल्का पिटे ! सम्मान स्वरुप लाईक र शेयर गर्नुहोला (भिडियो)
23,972 1 minute read
संसारकै ठूलामध्येको एक गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा नेपाली युवा छानिएका छन् । काठमाडौंका दिवेश पोखरेल अमेरिकाका विश्वस्तरीय संगीतकार लियोनेल रिची, गायक ल्युक ब्रायन र गायिका केटी बेरीको अगाडि प्रस्तुती दिँदै हलिउड प्रस्तुतीका लागि छानिएका हुन् ।
हलिउड प्रस्तुतीका लागि छानिएका टप ४० मध्येका एक दिवेश हाल अमेरिकाको क्यान्सस राज्यको विचिटामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । उनी ५ वर्षअघि नेपालबाट अमेरिका गएका हुन् । आइतबार अमेरिकी च्यानल एबिसीबाट प्रसारण भएको पहिलो श्रृंखलाबाट उनी छानिएका हुन् । दिवेशले आर्थर गनको उपनामबाट गाउँदै आएका छन् ।
पहिलो पटक आफ्नी आमाबाट दिवेशले गितार पाएका थिए त्यसपछि उनले गाउन थालेका थिए । प्रस्तुतीका क्रममा दिवेशले नेपालको सुन्दरताबारे मात्रै चर्चा गरेनन् उनले नेपालीपन पनि प्रस्तुत गरिरहेका थिए । उनले अभिवादन गर्दा पनि नमस्ते गरेका थिए र पटक पटक नमस्ने गरिरहेका देखिन्थे । उनको प्रस्तुतीको जजहरुले पनि निकै प्रशंशा गरेका थिए ।
महिनौ पछि फेला परेको बालकको परिवारमा छायो खुशी ! जयन्ती राईबाट आयो फेरी ठुलो सहयोग (हेर्नुस् भिडियो)